छिमेकीलाई ऋण दिएको ३६ लाख रुपैयाँ फिर्ता नदिएपछि झापाका यामनाथ दहालले प्रचण्ड गर्मीमा शुरु गरे आमरण अनसन…(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – दैनिक खबर
झापा, १९ बैशाख । झापाका यामनाथ दहाल आफुले लगानी गरेको लाखौं रुपैयाँ फिर्ता नभएपछि आमरन अनसन नै बसेको छन् ।
जिल्लाको गौरादह—१ का दाहालले लाखौं रकम डुब्दा पनि कहिँ कतैबाट न्याय नपाएको भन्दै बिहीबारदेखि आमरन अनसन सुरु गरेका हन् ।
स्थानीय सृजना घिमिरेले लेनदेनको क्रममा सापट लगेको आफ्नो ३६ लाख रुपैयाँ बर्षौँ बित्दा पनि फिर्ता नदिएपछि अनसन बसेको दाहाल बताउँछन् ।
गौरादह बजारमा उनी यतिवेला प्रचण्ड गर्मीमा अनसन बसिरहेका छन् । ‘गौरादहमा सबैसँग हार गुहार गरेँ, जनप्रतिनिधिसँग पनि सहयोग मागेँ, पैसा लगेको बकाइदा कागज छ, तर न्याय पाइनँ’, अनसनरत दाहालले भने ।
दाहालले बरु ज्यान जाला आफ्नो पैसा फिर्ता नभइन्जेल अनसन नतोड्ने बताए । अनसन बस्दा बस्दै आफ्नो ज्यान गए श्रीमती पनि अनसन बस्ने उनको भनाई छ ।
गाउँसमाजमा पटक पटक छलफल भएपनि आफुले न्याय पाउन नसकेको दाहाल दुखेसो पोख्छन् । दाहाल भन्छन्, ‘सम्पतिमा हाई हाई विपत्तिमा कोही छैन दाजु भाई भन्थे ठ्याक्कै ममा यस्तै आइलाग्यो ।’
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले छलफल गरेको तर प्रतिवेदन गुपचुप पारेको दाहालको आरोप छ । न्याय दिनुपर्ने न्यायीक समिति पनि पीडकसँग मिलेको उनको आरोप छ ।
घिमिरेले २०७३ साल चैत्र १७ देखी पटक पटक आफूसँग पैसा लगेको र छिमेकको नातामा विश्वासले ऋण पनि तिरिदिएको दाहाल बताउँछन् । तर, घिमिरेलाई आफूले सहयोग गर्दा आफै डुबेको र पैसा माग्दा थर्काउने र धम्कि दिने गरेको बताउँछन् ।
दाहालले सृजनालाई कारोबार गर्ने शिलशिलामा २६ लाख दिएका थिए । हाल त्यसको ब्याज सहित जोड्ने हो भने ३६ लाख पुग्ने दाहालको दावी छ ।
विप्लव समूह र प्रहरी बीच काभ्रेमा मध्यराती भयो गोली हानाहान, दोश्रो जनयुद्दको भब्य तयारीमा विप्लव समूह (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
March 20, 2019 March 20, 2019 Livenepal
काठमाडौं, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय तहका नेता रहेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्न पुगेको प्रहरी टोली र विप्लव समूहबीच मंगलबार राति गोली हानाहान भएको छ। काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा विप्लव समूहका केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश वली रहेको सूचनाका आधारमा केन्द्रबाट खटिएको टोलीलाई सो समूहका कार्यकर्ताले गोली हानेपछि प्रहरीले जवाफी फायर गरेको हो। घटनामा कुनै मानवीय क्षति […]
काभ्रेबाट आयो एक्कासी सबैलाई चकित पार्ने खबर : बाटैभरि एकाएक काउली फालेर आन्दोलन शुरु गरेपछि… (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काभ्रे। इट्टा भट्टाको धुँवाले काउली नबिकेपछि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेल मा पाँचखालका किसानले बाटोमा काउली फालेर प्रदर्शन गरेका छन् । पटक पटक सम्बन्धीत निकाएसंग भट्टा सार्न ध्यानाकर्षण गराए पनि चासो नदिएपछि किसान विरोधमा उत्रिएका हुन् । राज्यले किसानको माग पुरा नगरे सामुहिक आत्महत्या गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
एउटै मान्छे : श्रीमतीको पनि बाबा, छोराछोरीको पनि बाबा, दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस् चकित पर्नुहुन्छ (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
January 5, 2019 January 5, 2019 Livenepal
‘बाबा हजुरको कपडा कति फोहोर, अर्को चेन्ज गरेर अफिस जानुस् न’ भात खाएर निस्कन लागेका काकालाई काकीले भनिन् । काकासँगै स्कुल जान लागेकी सानी छोरीको पेन्सिल हराएछ । छोरीले भनिन्, ‘बाबा त्यहाँ पसलमा पेन्सिल किन्नुपर्छ है ?’ काकालाई काकीले पनि बाबा भनिन्, छोरीले पनि ! वास्तवमा काका छोरीको बाबा हुन् कि काकीको ? काका र […]